MDC-T Yoita Kongiresi Yayo Muna Zvita yeKutsvaga Achatsiva VaMorgan Tsvangirai
MDC T - Interim President Thokozani Khupe; Nat'l Chairman Morgan Komichi & Sec. Gen Douglas Mwonzora
Dare repamusoro soro rabvumidza MDC-T kuti iendese mberi mazuva ekuita musangano wayo wekongiresi yechimbi chimbi, kana kuti extra ordinary congress.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau kumusha weHatfield, vakafanobata chigaro chasachigaro weMDC T, VaMorgan Komichi, vati vafadzwa nemutongo waturwa nedare repamusoro soro.
VaKomichi vati vakatadza kuita musangano wavo nekuda kwechirwere cheCOVID-19 izvo zvakaita kuti mazuva aive atarwa nematare adarike.
VaKomichi vati vatotara mazuva ekuti vanhu vadomwe vachazenge vachida kukwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika vakati vatara 13-20 Zvita kuti vaite musangano wavo wekunosarudza achazenge achitungamirira MDC T.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru mubato reMDC T, VaDouglas Mwonzora, vati vose vakadzingwa kukanzuru kana muparamende havazi kuzobvumidzwa kuuya kumusangano wavo uyu vachiti havasisiri nhengo dzebato ravo.
VaMwonzora vatiwo dzimwe nhengo dzese dzebato ravo kana vane makore anodikanwa vanogona kukwikwidza chigaro chemutungamiriri webato iri.
VaMwonzora vatiwo sarudzo dzavo dzichange dzichiitwa nesangano ravachawirirana rakasununguka kuti sarudzo dzive dzejekerere.
VaMwonzora vashoropodzawo kutorwa kwemuzinda wavo nevechidiki vari kugarapo vachiti vanoda kuti vatungamiriri veMDC T neMDC Alliance vabatane. Asi VaMwonzora vati vechidiki ava vabuda mugwara remusangano.
Asiwo VaPaul Gorekorevari kutungamirira vechidiki ava vari pamuzinda weMorgan Tsvangirai House vatiwovari kufamba negwara remusangano huye vatambira nemufaro mutongo wapiwa vachitiwo vanotarisira kuti panozosvika 30 Mbudzi vatungamiriri vavo vanenge vatevedzera zviri kudiwa nevechidiki zvekuti vabatane.
VaGorekore vatiwo hapana ari kuzovabudisa pamuzinda weMorgan Tsvangirai House.